गोकर्ण बिष्टले आमासंगै मतदान गरे, आमा भन्छिन्, ‘ छोरा प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने धोका छ’ – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गोकर्ण बिष्टले आमासंगै मतदान गरे, आमा भन्छिन्, ‘ छोरा प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने धोका छ’
गोकर्ण बिष्टले आमासंगै मतदान गरे, आमा भन्छिन्, ‘ छोरा प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने धोका छ’
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर २१, बिहीबार १२:०४ मा प्रकाशित
यि पनि पढौ:
टेलिफोन अप्डेट: कस्तो छ मुसिकोट नगरपालिका र यस आसपासको चुनावी अप्डेट?
कसरी भईइरहेको छ गुल्मीमा मतदान? यस्तो छ लाईभ अप्डेट:
गुल्मी, २१ मंसिर । नेकपा एमालेका सचिव तथा गुल्मी क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधी सभा उमेदवार गोकर्ण बिष्ट र आमा ८८ बर्षिया चिन्ता कुमारी बिष्टले एकैचोटी मतदान गरेका छन् । उनीहरु दुवै जनाले इस्मा गाउँपालिका ४ स्थित रामराज्य मावि मतदान केन्द्रबाट बिहिबार बिहान साढे १० बजे मतदान गरेका हुन् ।
छोरासंगै मतदान गरेकी उनकी आमा चिन्ता कुमारीले छोरा र पार्टीको भविष्यका लागि मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘धेरै पटक भोट हाने, छोरा र राष्ट्रलाई राम्रै भएको छ,’उनले भनिन,‘बाचुन्जेल प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने धोका छ ।’ अहिलेसम्म पनि गोकर्ण बिष्टकी आमा भन्न पाएकोमा उनले गर्व गरिन् ।
साथै मतदान गरे लगत्तै नयाँ पत्रिकार्कीसंग कुरा गर्दै उमेदवार बिष्टले आफ्नो आमाको रहर पुरा गर्ने बताए । ‘मलाई मेरो आमा सपना मात्र होइन, देशमा धेरै आमाका सपना पुरा गर्ने उत्प्रेरणा मिलेको छ,’बिष्टले भने,‘जनताका माया पाए असम्भव छैन् ।’
फोटो फिचर ः